I-china-reducers -sinciphisi, izixhobo zokunciphisa iintshulube, iibhokisi zebhokisi zentshulube, iibhokisi zeeplanethi, izinciphisi zesantya, umahluko, iihelical gear, ii-gear zentsimbi zentsimbi, iibhokisi zegiya yezolimo, izixhobo zeetrektara, izixhobo zeelori
Isinciphisi sesantya ngokubanzi sisiqwenga somatshini esilula. Olu loliwe nje wokuhamba phakathi kwemoto noomatshini oqhele ukusetyenziselwa ukunciphisa isantya esidluliselwa ngamandla. Isinciphisi sesantya, esikwabizwa ngokuba sisinciphisi segiye, sisixhobo ...
Ukuqhagamshela iwebhusayithi ikhonkco-Cinezela iFit (BS / DIN / ANSI) Ikhonkco eliqhagamshelekileyo elisemgangathweni le-ANSI yamatyathanga anokufumaneka, asetyenziswe nakwimixokelelwane ejijekileyo indawo enesantya okanye iimeko ezinzima zihlangatyezwa. Ukubonelelwa ngezikhonkwane ezibini zokudibanisa ezikhuliselwe ...
Umxokelelwano ochanekileyo we-roller chain yeyona ndlela isebenza ngokukuko kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhambisa amandla oomatshini, abathi, ngexesha lokuqeqeshwa kwezicelo zeshishini, ...
Umxokelelwano ochanekileyo we-roller roller uhlala uyindlela efanelekileyo nesebenzayo yokuhambisa amandla oomatshini, athi, ngexesha lezicelo zemizi-mveliso, aphantse athabathe zonke ezinye iintlobo ...
UKUDityaniswa kweQela leViking kwiConnexus Industries kuvumele ukuqhubeka kweVC Brand yeeTyathanga zensimbi. I-VC Brand ithi inkqubo yokuvelisa egqwesileyo, kunye neenkonzo ezinde zobomi bemihla ngemihla. Olu hlobo lwentsebenzo luqukethe ...
UKUDityaniswa kweQela leViking kwiConnexus Industries kuye kwavumela ukuqhubeka kweVC Brand yeTyathanga leeNtsimbi. I-VC Brand ithi inkqubo yokuvelisa esemgangathweni, kunye nenkonzo ende. Olu hlobo luphumeleleyo lubandakanya ...